Puntland oo sheegtay inay yaraadeen weeraradii Burcad-Badeedda. (Dhegayso) – Radio Daljir
Diseembar 2, 2012 9:15 b 0
Garoowe, Dec 2, Agaasimaha Hay’ada la dagaalan ka Burcad-Badeeda Soomaalida u qaabilsan Puntland Md Cabdirisaaq Dirir Ducaysane oo waraysi gaar ah siiyey Radio Daljir ayaa sheegay in sanadkan falalka Burcadu wax ku afduubaan ay hoos u dhaceen %59 sida uu sheegay.
Arintan ayuu dhinaca u saaray cadaadis badan oo Burcad-Badeedda kaga yimid beesha Caalamka iyo dadka Soomaalida uu aad u fahmey dhibka ay Burcadu ku hayaan umadda Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan.
Wuxuu sheegay in ka Puntland ahaan ay door weyn ku lahaayeen yaraynta Burcad-Badeedda, dagaalka ugu badan ee Puntland la gashay Burcadda ayuu ku sheegay inuu yahay Wacyigelin Ballaaran oo ay u sameeyeen bulshadda isagoo tilmaamay wacyigelintaasi inay ka qayb qaateen Odayaasha dhaqanka, Culimada diinta, aqoon yahanka iyo bahda Saxaafadda.
Sidoo kale agaasimuhu wuxuu sheegay in wadanka Soomaaliya xiligan lagu haysto 5 markab oo u afduuban Burcad-Badeedda Soomaalida tiradaasoo aad uga yar maraakiibtii sanadihii hore ku afduubnaan jirey wadanka Soomaaliya.
Puntland ayaa sanadkii hore hawl gelisey ciidanka Badda oo loo aasaasay la dagaalanka Burcad-Badeeda iyo Maraakiibta Jariifka, Waxaana mudadii ciidamadaasi shaqaynayeen ay waxbadan ka qabteen amaanka xeebaha Puntland.
Caawa iyo Daljir, Axad, Dec 2,Cabdifataax Cumar Geedi ‘Nairobi Kenya’